जनप्रतिनिधि दुरदर्शी ,पारदर्शी र दृढ इच्छाशक्तिको भए जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि संवृद्धि ल्याउन सकिन्छ : उमेश प्रसाद भट्ट - Ankuran Khabar
जनप्रतिनिधि दुरदर्शी ,पारदर्शी र दृढ इच्छाशक्तिको भए जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि संवृद्धि ल्याउन सकिन्छ : उमेश प्रसाद भट्ट
२०७७ माघ १६0
सुदुर पश्चिममा रहेको डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका धार्मिक,ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय हब बनाउन सकिने संभावना रहेको पालिका हो । दुर्गम स्थानको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले पनि के कस्ता भूमिका निर्वाह गर्दा सिमित स्रोत र साधानको अधिकतम प्रयोग गरेर विकास निर्माण गर्न सकिन्छ । सुदुर पश्चिमका पालिकाहरुमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न के कस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्छ लगाएतका विषयमा अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद भट्ट(विकास)संग अंकुरण खबरको टिमले गरेको कुराकानीको संपादित अंश…
तपाई निर्वाचित भएर आए पछि अजयमेरु गाउँपालिकाका जनता प्रतक्ष्य लाभान्वित हुने के कस्ता काम गर्नुभयो ?
करिव २१ वर्षको अन्तराल पछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिहरु पायो । यस बीचमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गरि जनतालाई अधिकार दिलाउन, दिगो शान्ति, विकास,समानता र स्वतन्त्रताको लागि भन्दै देशमा ठुलठुला क्रान्ति भए,जनयुद्ध भयो हजारौ व्यक्ति सहिद भए । निकै राप र तापको सामाना गर्दै जनताका प्रतिनिधिबाट नै संविधान लेख्ने र जारी गर्ने अवस्थामा देश पुग्यो ।
यही क्रममा अजयमेरुका जनताले लामो समयको अन्तराल पछि मलाई जनप्रतिनिधि छाने । जनताले जुन अपेक्षा गरेर मलाई निर्वाचित गराए अहिले म उनीहरु सामु गरेका बाचा,उनीहरुका अपेक्षा पुरा गर्न अहोरात्र लागिपरेको छु । हाम्रो टिम निर्वाचित भएर आए पछि सबै भन्दा पहिला यहाको आवश्यक्ता,संभावना र चुनौतीको निर्कोल गर्यौ । त्यस पछि योजनावद्ध तरिकाले काम गर्दै आएका छौं ।
साधारण स्वास्थ उपचार नपाएर यहाँका धेरै जनताको ज्यान गएको तितो यर्थाथ हाम्रो सामु छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पालिका भित्रका पनि दुर्गम स्थानमा ५ वटा सामुदायीक स्वास्थ इकाई निर्माण गरि स्वास्थ सेवा दिएका छौं । २ वटा स्थास्थ्य केन्द्रमा वर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौं । ३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रबाट अल्ट्रासाउंड सेवा दिरहेका छौं । सबै स्वास्थ्य चौकीमा ज्ञान सेवा सञ्चालनमा छ । एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छौं, आयुर्वेद सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । १० प्रतिशत छुटमा २४ सै घण्टा मेडिकल सेवा सञ्चालन गरेका छौं । प्रत्येक सुत्केरीलाई स्थानीय उत्पादनको समिश्रण गरि पौष्टिक आहारयुक्त खानपानको लागि केही सहयोग गरेका छौं । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो हाम्रो स्रोत,साधान र क्षमता अनुसारको ठुलै उपलब्धि हो ।
दीर्घकालिन र समय सापेक्ष विकासको प्रमुख आवश्यक कुरा भनेकै शिक्षा हो । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले पालिका भरीका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयमा ३२ जना दक्ष शिक्षकलाई नीजि स्रोतमा परिचालन गरेका छौं । त्यस्तै स्थानीय विषय बस्तु समेटेर हाम्रो अजयमेरु नामक पाठ्यपुस्तक पठनपाठनमा ल्याएका छौ । कृषिसंग संवन्धित एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अनाआवश्यक विद्यालय मर्ज गर्दै गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षामा जोड दिएका छौ ।
हाम्रो गाउँपालिकाको प्रवल संभावना रहेकै क्षेत्र भनेको कृषि हो । हामी जनप्रतिनिधि हुनु भन्दा अगाडी तरकारी लगाएतका खाद्यनमा अरुको भर पर्नु पर्ने पालिकामा अहिले २१५ वटा भन्दा वढी व्यावसायिक कृषि फार्महरु खुलेका छन् । हामी तरकारी,मासु,दुधजन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर हुदै अन्य पालिका वा जिल्लामा पठाउने तयारीमा छौं । अहिले पढेलेखेका युवाहरु,विदेशीएका युवाहरु कृषिमा आकर्षित हुदै गएका छन् । यसको लागि पालिकाबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएका छौं ।
हाम्रो पालिकामा ६ वटा वडा छन् । दुरदराजको यो पालिकामा सबै वडामा मोटरबाटो पुगेको छ । प्रत्येक बस्तीमा खानेपानी पुर्याएका छौ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै अगाडी बढेका छौं,विजुली बत्ति घरघरमा पुयाएका छौ । जनतासंग सरोकार राख्ने हरेक कुरा पुरा गर्न लागेका छौ । इच्छा शक्ति भयो भने जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रो पालिकालाई लिन सकिन्छ ।
तपाईले यसो भनिरहदा जनप्रतिनिधिले अपेक्षाकृत काम गरेनन् भन्ने गुनासो छ नी ?
हो, यो गुनासो मैले पनि धेरै सुनेको छु । तर एकले बिरायो सारा पिरायो भने जस्तै सबैलाई एकै टोकरीमा राखेर हर्न भएन् । मेरो पालिकाकाबासीलाई सोध्नुस बोलाई र गराईमा एकरुपता छ की छैन् भनेर । मैले स्थानीय तहको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै अधिकतम बिकास गर्ने कुरामा लागिपरेको छु । यसको अनुभुत जनताले गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा प्रदेश र संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएका करण सोचेअनुकुल बिकास हुन सकेन भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिका धेरै गुनासा
सुनिन्छ । तपाईको पालिकामा यस्तो समस्या छ की छैन् ?
माथिल्लो तहमा समन्वय के कस्तो तरिकाले गर्ने भन्ने स्वयं जनप्रतिनिधिको हातमा छ । देश संघियतामा जानुको मूख्य उद्येश्य पनि विकास छिटो होस्, जनताले राज्यबाट पाउने सुविधा आफ्नै घर ठाँउमा सहज तरिकाले पाउन भन्ने भएकाले त्यस्तो असहयोग भन्ने हुँदैन् । यद्यपी कतिपय कुरा प्रदेश र संघ सरकारले चाँहादा चाँहादै पनि नहुन सक्छ ।
स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टचार हुन्छ ,जसकै कारण विकास हुन नसकेको कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसनधानले पनि देखाउछ ? के यो आरोप मात्र होकी सत्य हो ?
स्थानीय तह होस् या प्रदेश या संघ तिन ओटै तहमा भ्रष्टचार शून्य गर्ने नीति अंगालेको छ सरकारले । यसको मतलब यी भनाई सबै गलत हुन भन्ने चै हैन् । बेला बेलामा भ्रष्टचारका घटना आउने गरेका छन् । त्यो सुन्दा दुख लाग्छ । मेरो गाउँपालिकाको कुरा गर्दा म हरदम यो कुरामा सचेत छु । कोही कसैले यस्तो गरेको पाइएमा कानुन मुताविक कारबाहीको भागेदार बनाउनु पर्छ । हामीले आम पालिकाबासीलाई पनि यही कुरा बुझाएका छौं ।
डडेल्धुराबाट निर्वाचित पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यही जिल्लाबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र पनि डडेल्धुरा संवृद्ध हुन सकेको छैन् तपाईहरुलाई चै उहाँको कत्तिको सहयोग छ ?
यो प्रश्न या जिज्ञासा धेरै हुनु स्वभाविक हो । सुदुर पश्चिमको विकट जिल्ला डडेल्धुराबाट त्यो शीर्ष स्थानमा पुग्नु गौरवको कुरा हो । यद्यपी उहाँ(शेरबहादुर देउवा) ले आफ्ना आसेपासे र चुनावमा भोट बाहेक डडेलधुरालाई कहिलै प्रथामिकतामा राख्नु भएन् । यही कारण पनि डडेलधुराबासीले यहाँ जुन सुकै पदमा पुगेपनि सुखी हुन सकेनन् ।
अर्को कुरा काममा सहयोगको कुरा गर्नु भयो । जल्लाको काममा उहाले देखाउने अभिभावकत्वको कुरा त परै जाओस् आफ्नो पालिका मात्र नभएर जिल्लाको विकास र संवृद्धिको लागि उहाँलाई भेट्न खोज्दा कहिल्यै समय मिलाउनु हुन्न । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ की उहाँ जिल्ला प्रति कति कर्तव्य निष्ट र चासो राख्नुहुन्छ भनेर ।
तपाई नेकपा निकट जनप्रतिनिधि, अहिले केन्द्रमा देखिएको विवादले स्थानीय तहमा काम गर्न कतिको प्रभाव पारेको छ ?
स्वभाविक रुपमा केन्द्रको असर स्थानीय तहमा पर्ने नै भो । नेपाली जनताको लामो त्याग,तपस्या,बलिदान र आवश्यक्ताबाट एक जुट भएको नेकपामा यति छिट्टै यस्तो अवस्थामा आउनु पक्कै पनि सबैको लागि निकै दुखको कुरा हो । यसले पार्टीमा गम्भीर असर त परेको छ नै देशलाई नै संकट पुर्याएको छ । स्थानीय तहमा पनि काम गर्न केही असहज हुन्छ नै । तर पार्टीमा एकलौटी निर्णय हावी गराउने देश र जनताका मुद्धा भन्दा पनि आफ्नो र निकट व्यक्तिको मात्र फाइदा हेर्दा पार्टीमा यो अवस्था सृजना भएको हो । अग्रगमनमा जाने की प्रतिगमनमा यो हामी पार्टी नेता कार्यक्रता मात्र नभएर सम्पूर्ण देशबासीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तपाइको परिवारनै राजनीतिकमा होमिनु भयो अग्रजहरु शीर्षतहमा हुँदा पछिल्लो तहका व्यक्तिको सही मूल्यांकन भएन् आफ्नो योग्यताले कुनै पदमा पुग्दा पनि अग्रजकै ट्याग लाग्ने गर्छ भनिन्छ ,तपाइको अनुभव कस्तो छ ?
हो, मेरो परिवार जनताको मुक्ति र समुन्नत देशको लागि भन्दै आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरि जनयुद्धमा होमियो । जनयुद्धकै क्रममा मेरो दाइ सहिद हुनुभयो । अहिले मेरो अर्को दाइ नेकपा सुदुर पश्चिमको सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ । जनयुद्ध होस या अन्य जुनसुकै संघर्षमा होस् हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेको योग्दान गरेका छौं । परिवारका अन्य सदस्य माथिल्लो ठाउँमा पुगेर जनताका आशा भरोसा पुरा गर्न लाग्नु गौरवको कुरा हो । हामी पनि आफ्नो त्याग, क्षमता, निरन्तरता र जनताले चुनेकै कारण कुनै पदमा पुग्दा पनि अग्रजको नामले भएको भन्दा चै दुख लाग्छ । कुनै योगदान विनै माथिल्लो पदमा कोही व्यक्ति पुग्दा बिरोध नहुने तर आफ्नो क्षमताले त्यो स्थानमा पुग्दा विरोध गर्ने जमातका खातिर केही भन्नु छैन्, राजनीतिक सस्कार र आदर्शमा डिह्ने हामीहरुले यस्ता आरोपलाई सामान्य रुपमा लुनु पर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सिटौला पक्षको विरोध सभा
फिल्म ‘आमा’ यूट्युबमा रिलिज